News - Zishan Group waxay ku guuleysatay “Alaabada Qasacadeysan ee Macaamiisha ugu Fiican 2020 ″
Kulankii lixaad ee la balaariyay ee guddiga shanaad ee agaasimayaasha 2020 Shiinaha Warshadaha Cuntada qasacadaysan ayaa si guul leh loogu qabtay magaalada Shanghai bishii Nofeembar 9. Guddoomiyaha Liu Youqian ee Ururka Warshadaha Cuntada ee qasacadaysan ee Shiinaha iyo wakiillo ka socda unugyo xubno kala duwan ah ayaa goobjoog ahaa. Isla mar ahaantaana, Mr. Chen Ji, Agaasimaha Xafiiska Kormeerka Sharciga ee Maamulka Gobolka ee Xeerarka Suuqa, iyo Sun Lu, Ku-xigeenka Agaasimaha Cuntada ee Waaxda Adeegyada Macaamiisha ee Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Warfaafinta. , Chen Guihua, Agaasimaha Waaxda Caqabadaha ee Xafiiska Ganacsiga iyo Baadhista ee Wasaaradda Ganacsiga iyo hoggaamiyeyaal kale, ilaa 200 oo qof ayaa ka soo qaybgalay kulanka.
Dhamaadka shirka, liiska "Macaamiisha waxay jecel yihiin alaabada qasacadaysan ee 2020", "Qanacsanayaasha Alaab-qeybiyeyaasha Shirkadaha Cuntada qasacadaysan ee 2020", "Qanacsanayaasha Alaab-qeybiyeyaasha ee Shirkadaha Cuntada qasacadaysan ee 2020" iyo "Kuwa aadka u qaybiya cuntada Cuntada qasacadaysan Warshadaha sannadka 2020 "ayaa lagu dhawaaqay oo la siiyay.
Waxaa lagu soo warramey in sanadka 2020, waxqabadka xulashada "Cunnada oo Dhammaan Cunnooyinka · Cunnada Qasacadeysan" ee warshadaha cuntada ee qasacadaysan ee Shiinaha ay leedahay jawaab adag oo soo jiidatay indhaha bulshada oo dhan. Si dhab ah looga tarjumayo mabaadi'da caddaaladda, caddaaladda, iyo furfurnaanta, Isku darka xulashada khadka tooska ah iyo dib u eegista khubarada ayaa ugu dambeyn la xushay 31 "Alaabooyinka Cuntada ee qasacadaysan ee Macaamiisha ee 2020", oo ay ka mid tahay Zishan.
Abaalmarintani waa aqoonsi sare oo ay helaan inta badan macaamiisha soosaarka Zishan. Waxaan, had iyo jeer, ku dhegi doonnaa himilada shirkadeed ee "bixinta cunto aamin ah, caafimaad leh oo la hubo bulshada", oo aan la wadaagi doonno dadka dalka tayada adduunka.
Intaas waxaa sii dheer, Zishan waxay sidoo kale kaqeyb gashay (CCMF2020) 11aad Shanghai Cuntada Qasacadeysan ee Caalamiga ah, Qalabka Ceyriinka iyo Kaabayaasha, Mashiinada Expo iyo Bandhigga Cunnada Caalamiga ee Shanghai ee 24aad oo si isdaba joog ah loo qabtay (CCMF2020), taasoo muujineysa sumadda iyo wax soo saarka Zishan ee macaamiisha dal iyo dibad .